AH: 2+2 = 5
ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာနေ၀င်ကြည့်တယ်။ ကျောင်းသားက သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ထင်မြင်ယူဆချက်တစ်ရပ်ကို ကျောင်းသင်ခန်းစာကနေ ခွဲထွက်ပြီးတော့ ဆရာတစ်ယောက်ကို ပြောပြနေတယ်လို့ ယူဆလိုက်ပါ။ ကျွန်တော် brain wash အလုပ်ခံထားရပါတယ်။ တပည့်တစ်ယောက်က ဆရာတစ်ယောက်ကို ဒီလိုပြန်ပြောနေတာကို ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မနေပါဘူး။ ငါ့ကို ပညာလာစမ်းနေတယ်လို့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ထင်နေပါတယ်။ ငါ့သင်ခန်းစာကို လာနှောက်ယှက်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်နေပါတယ်။ ဒါမျိုးဟာ ကျွန်တော်ထင်တယ် မြန်မာနုိုင်ငံ ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံး ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီ သင်ကြားရေးစနစ်အောက်ကနေ ကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုး စိတ်ဓာတ်ရှိနေတယ် ထင်တာပဲ။
ဒီလုိုပါပဲ ကျွန်တော်တို့ နုိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာ ဆရာတစ်ယောက်က ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို တုန့် ပြန်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ? ဒီအတွက် အကျိုးဆက်အနေနဲ့ တုိုင်းပြည်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေရဲ့ အတွေးအမြင် ဘာဖြစ်သွားမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ? တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂါတ်ဘာဖြစ်သွားနုိုင်ပါသလဲ? ကျွန်တော်တို့ ဘာကို ဖောက်ထွက်ဖို့ လိုအပ်နေလဲ ?
သူတို့လေးတွေကို ဒါဟာ ဒါကြီး၊ ဟောဒါကို ဟောဒီလို ယုံ၊ ဘာမှ ပြန်မမေးနဲ့ ဆိုတာထက် သူတို့ ဘာတွေ တွေးခေါ်နုိုင်တယ်၊ ဘယ်လိုမျိုးတွေခေါ်ရမယ်ဆိုတာကို ပျိုးထောင်ပေးနုိုင်မှ ဒီတုိုင်းပြည် ထူထောင်လာနုိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ နောက်လိုက်တွေ ထပ်မလိုတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တာ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်လိုအပ်ရင် အနာဂါတ်မှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်လေးတွေကို ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ တွေးတောကြံဆနုိုင်တဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုး ရရှိဖို့ မြေတောင်မြှောက် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓာတ် ရှိတဲ့လူတွေကို မွေးထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အနာဂါတ်ဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး။
ဟိုတစ်လောကလည်း ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ပြောပြတယ်။ လူတွေကသာ ဒီမိုကရေစီ အော်နေကြတာ၊ တစ်ကယ်တော့ သူတို့ဟာ အရင်ခေတ်ကို သာယာနေတုန်းပဲ ဆိုတာလေးပါ။ အခု ရုံးတွေ၊ ကုမ္ဗဏီတွေမှာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပုံမှန် ပြည်သူ လူတန်းစားတွေကို ရုံးဝန်ထမ်းတွေက Service ပေးတဲ့ ပုံစံနဲ့ အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည်တွေလာရင် ၀န်ဆောင်မှု့ပေးတဲ့ ပုံစံ ဘာကွာသလဲ ဆိုတာကို။ သူတို့တွေဟာ အရင်ခေတ်က လက်ကျန် လုပ်ဆောင်မှု့တွေကို အသားကျပြီးတော့ သာယာနေတုန်းပဲ။ နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ချင်နေတုန်းပဲ။ တန်းတူညီမျှ ၀န်ဆောင်မှု့ပေးရမှာကို ရွံရှာနေတုန်းပဲ။ ဒီလိုမျိုး မျက်နှာလုို မျက်နှာရ လုပ်ပေးရတာကို ကျေနပ်နေတုန်းပဲ။ ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီကိုသာ လိုချင်နေကြတာ သူ့ရဲ့ အနှစ်သာရကို ခုချိန်ထိ ကိုယ်တုိုင် မဖန်တီးနုိုင်ကြသေးဘူးဆိုတာလေးကိုပါ။
ထားပါတော့လေ… ဒီအတုိုင်းလျှောက်ရေးနေရင် ခု ပိုစ့်နဲ့ မဆိုင်တာတွေ ပါကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်လိုက်ပါပြီ။
Posted by AH at 8/17/2013 04:47:00 PM
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) August 17, 2013 at 8:02 PM
the more clever the moreastudent would get punished. I hate this policy. But we are still in it, aren't we?
"တွေးတောကြံဆနုိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းလေးတွေဖြစ်လာဖုို့ မြေတောင်မြှောက်ပေးရမှာပါ....ဆုိုတဲ့အပုဒ်ကိုအပြည့်အ၀ထောက်ခံတယ်။ ကိုယ်တုိုင်တွေးခေါ်သုံးသပ်ဝေဖန်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ချနုိုင်ဖုို့ ဆုိုတဲ့...practice ..ကုိုတော်တော်လုပ်ယူရမယ်။
ကျမတုို့ ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကလည်း ဆရာသမားလူကြီးမိဘကုို ပြန်ပြောတဲ့သူဟာ ရုိုင်းစုိုင်းသူလုို့ မြင်နေတဲ့အမြင်ကုိုလေ့ကျင့်ပေးခံထားရတယ်လေ။ အဲဒီနေရာမှာမိဘတွေ ဆရာသမားတွေက ငယ်စဉ်ကတည်းက ယဉ်ကျေးစွာပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ခွင့်မျိုးကို..ခွင့်ပြုပျိုးထောင်ပေးဘို့ လိုတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
မှန်ပေသည် ကျနော်တို့ပြည်မှာက အဲဒီစနစ်ကြီးရဲ့
လွှမ်းခြုံမှု့ကို ကောင်းကောင်းခံနေခဲ့ရတာ ကြာပြီ
သား/သမီး တွေကလည်း မိမိတို့ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို
ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တပည့်လေးများကလည်း
သူတို့ရဲ့ အတွေးအမြင်ကို တင်ပြခွင့် မရကြ ။
ဆိုတာမျိုးတွေကအပြည့်သာ နေရာ ယူထားကြတယ်
သုံးစားလို့ မရသော လူပေါင်းများစွာကိုသာ
အလေးခံပြီးတော့ မြန်မာ့မြေကြီးက ထမ်းပိုးထားရတယ် အကိုကြီးရေ....။
မီးမီးငယျ August 19, 2013 at 7:40 AM
သူတို့ အားလုံးသိတယ်၊ဘာမှဆင်ခြေမပေးနဲ့ ၊
ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ ငါအကုသိုလ်တွေးနေပြီလို့ လည်းထင်ပြန်တယ်..။
ကိုယ်တို့ လည်း...brain wash ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ၊